कृषि खबर – Page4– rastriyakhabar.com
खुर्सानीको नाम सुन्ने वित्तिकै जो कोहीको दिमागमा पिरोको याद आउँछ । धेरै पिरो खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुँदैन । चिकित्सकहरु पनि चिल्लो, पिरो, अमिलो धेरै खान नहुने बताउँछन् । तर पनि खुर्सानीले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा सवैलाई जानकारी नहुन्छ सक्छ । हरियो खुर्सानी अझ बढी फाइदा जनक..
मुटुसम्बन्धी समस्यादेखि मासिक धर्मको अनियमितता, कब्जियत, छाती पोल्ने समस्या र शरीरका अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको समाधानका लागि केराले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । केराले तत्काल ऊर्जा दिन्छ । त्यही भएर कमजोर हुनेबित्तिकै केरा खान सल्लाह दिइन्छ । यही भएर विश्वका प्रख्यात..
हरियो खुर्सानी खानुहोस् र क्यान्सर, छालाको संक्रमण जस्ता रोगहरुबाट बच्नुहोस्
खानामा अमिलो र पिरो मन नपाउने सायदै नेपाली होलान् । प्राय गरेर नेपालीहरु खानासँगै हरियो खुर्सानी भने पछि हुरुक्कै हुन्छन् । खानामा पिरो मन पराउनेका लागि हरियो खुर्सानी नभै नहुँने कुरा जस्तै भइदिन्छ । हरियो खुर्सानी पिरो र स्वादका लागि मात्र नभएर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत त्यतिकै फाइदाजनक छ..
कागतीको रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो । अपच एवं पेटको सबै जसो विकारहरु निष्काशन गर्न यो फल निकै उपयोगी मानिन्छ । पछिल्लो समय कागती खेती प्रति आम कृषकको आर्कषण बढ्दै जाँदा कुन कागती लगाउने भन्ने दुविधा रहेको पाईन्छ । यसका लागि फलफूल विज्ञ..
बेल (Wood Apple, Limonia acidissima) नेपालमा परापुर्व कालदेखि नै खाँदै आएको एक फल हो । बेललाई सस्कृतमा श्री फल भनिन्छ । यो ६-१० मि. सम्म अग्लो हुने अर्ध-पतझर रुख हो । यसका पातहरूमा एउटै पत्र डाँठमा तीनवटा पातहरू छुट्टिएका हुन्छन् र यसा लाई बेलपत्र भनिन्छ । तीनवटा पातमध्ये बीचको पात केही ठूलो हुन्छ । पातका साइज ५-१० से. मी...
खाद्यान्न यसरी सुरक्षित गरेर भान्सा प्रवेश गराउँदा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने
बुधबार, चैत्र २६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडाैं । अहिले ‘लकडाउन’ का समयमा अत्यावश्यक सामग्री किन्न घर बाहिर निस्कँदा आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गर्ने र ल्याइएका खाद्यान्न सुरक्षित गरेर मात्रै भान्सामा प्रवेश गराउँदा ‘कोभिड–१९’ सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । तरकारी, फलफूल, दूधलगायतका खाद्य सामग्री किन्न जाँदा माक्स, पञ्जा,..
बुढानिलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाका खाद्यान्न र तरकारी पसल दिनको तिन घण्टा खुल्ने
बुधबार, चैत्र १९, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बुढानिलकण्ठ र टोखा नगरपालिकाका खाद्यान्न र तरकारी पसल दिनको तिन घण्टा खुल्ने भएका छन।नगरवासीहरुलाई खाध्य सामाग्रीहरुको अभाव हुन् नदिनका लागि बिहान ५ बजे देखि ८ बजे सम्म पसलहरु खोल्ने निर्णय गरिएको हो। साथै सामान किनमेल गर्दा भिडभाड नगरी सामाजिक दुरी कायम गरेर सावधानी अपनाउन अनुरोध..
सागतरकारी धेरै उत्पादन गर्ने वा छिटो पकाउने चक्करमा किसानले अत्याधिक किटासक औषधी लगायत विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यही तरकारी बजार हुँदै हाम्रो भान्सामा आइपुग्छ । यसरी हामी विषाक्त सागतरकारी खान पुग्छौ, जसले अनेकौ शारीरिक समस्या निम्त्याउने गर्छ । क्यान्सरको कारण समेत बन्ने खतरा रहन्छ..
‘निर्धारित मूल्य नपाए किसानको उत्पादन सरकारले किन्ने ’
काठमाण्डौ । किसानले उत्पादन गर्ने सबै वस्तुको बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब सरकारले लिने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुकाे मूल्य निर्धारणका साथै व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सरकारले लिने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषि मन्त्रालयमा..
अकबरे खुर्सानी खानुका अचम्मका फाइदाहरु यस्ता छन्
काठमाडौं। अकबरे खुर्सानि स्वादका लागि नभइ स्वाथ्यका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक छ । यो खुर्सानि तपाई हाम्रो घर गाउमा पनि पाइने खुर्सानि हो । यसलाइ डल्ले खुर्सानी पनि भनिन्छ । खानाको स्वाद बढाउनुका साथै औषधिका रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ । यो खुर्सानी खाँदा अरू खुर्सानीको तुलनामा अति नै पिरो र मिठो पनि हुन्छ ।..
घ्युकुमारी स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। यसलाई अंग्रेजीमा एलोभेरा भनिन्छ र यसमा भिटामीन ए, बी, बी १२का साथै फोलिक एसिड, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम र पोटासियम जस्ता तत्वहरु पाइन्छन्। यसका केही फाइदाहरु यस्ता छन्ः १. यसको जुसले शरीरको अनावश्यक तौल घटाउन मद्दत गर्छ। २.मुटुका..
प्रायः भान्सामा प्रयोग हुने टिमुरबारे सवै परिचित भए पनि यसमा पाइने औषधीय गुणका विषयमा जो कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ । जाडो मौसममा टिमुरको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । यसले वाह्य तापमानसँग शरीरको सन्तुलन मिलाउन मदत गर्छ । साथै टिमुरले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ । टिमुर स्वादका..
निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार बढी रूख काटिए
काठमाडौं । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बन्दै गरेको निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार ६९ रूख काटिएका छन् । करिब ७७ किलोमिटर निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा सडक निर्माण क्षेत्रमा पर्ने करिब ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये २७ हजार ६९ रूख काटिएका द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन..
पर्सलेन झारमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण, कसरी प्रयोग गर्ने ?
प्रायः गाउँघरमा उम्रिने यो झारबारे सबै परिचित होलान् । ठाउँ अनुसार यसका विभिन्न नामहरु भए पनि यसको बैज्ञानिक नाम ‘पर्सलेन’ हो । असार–साउनको महिनामा खेतबारी तथा पर्खालमा यो झार निकै मात्रामा उम्रिन्छ । मानिसहरु यसलाई जंगली बुट्यान ठानेर लुछेर मिल्काउँछन् । यसमा पोषण तत्त्वहरू भरपूर मात्रामा..
नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा माछा र चामल ‘जोन’ बबनाउने
दुप्चेश्वर । नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ट्राउट माछा र समुन्द्रफिनी चामल क्षेत्र स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२० मा हुन लागेको नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि..